भोलि जेठ २४ गते शुक्रवार तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल !
जेठ २३, २०७६ GA
भोली बिक्रम संवत २०७६ साल जेठ महिनाको २४ गते शुक्रवार सोहि अनुरुप सन् २०१९ जुन ७ तारिख , तपाईको दिन कसरी बित्ला हेर्नुहोस तपाईको भोलीको राशिफल !
मानसिक संबेदनशीलताको अनुभव हुनेछ। माताको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले सताउने छ। जग्गा जमिनको कारोवार गर्दा बिशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने छ। मानसिक व्यग्रता कम गर्नका लागि आध्यात्मिक योगको साहारा लिनु पर्ने छ। पढाई लेखाईको क्षेत्र मध्यम रहेको छ।
मानसिक चिन्ताले सताउने छ। सिर्जनात्मक कार्यमा मन जानेछ। परिवार तथा साथीभाईका साथमा उत्तम भोजनको अवसर मिल्नेछ। आकस्मिक यात्रा हुने सम्भावना रहेको छ। आर्थिक कारोवारको क्षेत्रमा बिशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने छ। समग्रमा तपाईका लागि भोलिको दिन सामान्य रहेको छ।
साथीभाई एवम परिवारका साथमा दिन सुखद रहने छ। आर्थिक कारोवारमा सुरुवाती समयमा केहि बाधा व्यवधान आइपरे पनि अन्तत पुरा भएर जानेछ। कार्यमा ढिलासुस्ती देखिने छ। नोकरी व्यवसायको वातावरण अनुकुल रहेको छ। सहकर्मीको साथ र सहयोग प्रसस्त मिल्नेछ।
मनमा स्नेह भाव पैदा भएर जानेछ। इष्टमित्रका साथमा सुखमय दिन व्यतित हुनेछ। यात्रा एवम स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ। दाम्पत्य जीवनमा खुसियाली छाउने छ। समग्रमा कर्कट राशी हुनेहरुका लागि भोलिको दिन शुभ फलदायी रहेको छ।
हरेक कार्य गर्दा बिशेष सावधानी पुर्वक अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ। अनैतिक कार्य गर्नबाट बच्नु पर्नेछ। बाणी एवम व्यवहारमा बिशेष संयमितता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। विदेशस्थित् आफन्तजनका मार्फतबाट सुखद समाचार सुन्न पाइने छ।
घर परिवार एवम व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ। दाम्पत्यजीवन खुसियाली छाउने छ। स्त्री मित्रको तर्फबाट बिशेष लाभ मिल्नेछ। धन प्राप्त गर्नका लागि समय उपयुक्त रहेको छ। अभिवाहितका लागि विवाहको योग रहेको छ।
नोकरीमा पदोन्नतिको योग रहेको छ। ब्यापारमा उच्च अधिकारीको साथ र सहयोग अपेक्षाकृत ढंगबाट प्राप्त हुनेछ। माताको तर्फबाट लाभ मिल्ने देखिन्छ। बैवाहिक सम्बन्धमा खुसियाली छाउने छ। व्यापार व्यवसायमा लाभ मिल्नेछ। साथै आर्थिक लाभको सम्भावना रहेको छ।
साहित्य लेखनको क्षेत्रमा रुचि बढ्ने छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र प्रतिकुल रहेको छ। अनावश्यक बादविवाद र झैँ झमेलामा नाफस्दा नै राम्रो हुनेछ। सन्तान सुख मिल्ने छैन। यात्राको सम्भावना रहेको छ। अनावश्यक रुपमा खर्चको मात्रामा वृद्धि भएर जानेछ।
अपेक्षागरे अनुसार कार्यमा सफलता नमिल्नाले मानसिक चिन्ताको भय हुनेछ। खानपानमा बिशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। निश्चित समयमा काम पूर्ण भएर जाने छैन। नया कार्यको थालनी गर्नका लागि समय त्यति अनकुल रहेको छैन। स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ। अनावश्यक खर्चको मात्रामा वृद्धि भएर जानेछ। बोलीमा बिशेष संयमितता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ।
आर्थिक दृष्टिले भोलिको दिन लाभदायक रहेको छ। व्यापार वृद्धिको योग रहेको छ। आर्थिक कारोवारमा लाभ मिल्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा प्रगाढता छाउने छ। स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ। नया बस्त्रभुषणको खरिद गर्ने समय रहेको छ।
कार्यमा सफलता मिल्नाका साथै यश कृतिमा वृद्धि भएर जानेछ। आफन्तजनको तर्फबाट शुभ समाचार सुन्ने अवसर मिल्नेछ। घरमा धार्मिक एवम मांगलिक कार्यको आयोजना हुनेछ। नोकरी व्यवसायको क्षेत्रमा सहकर्मीको उल्लेखनीय रुपमा साथ र सहयोग प्राप्त भएर जानेछ।
बिद्यार्थी वर्गका लागि भोलिको दिन शुभ रहेको छ। नया कार्य हात लागि भएर जानेछ। कार्यमा सफलता मिल्नेछ। साहित्य लेखनको क्षेत्रमा रुचि बढ्ने छ। दाम्पत्यजीवनमा सुमधुरता छाउने छ। अनावश्यक खर्चको मात्रामा वृद्धि भएर जानेछ। समग्रमा मिन राशी हुनेहरुका लागि भोलिको सुभ फलदायी रहेको छ।
प्रकाशित : बिहिबार, जेठ २३, २०७६१४:४६
तपाईको यो साता कस्तो रहला ? हेर्नुहोस जेठ २६ देखि जेठ ३२ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल